Ntanetị 2.0 maka Ngosiputa azụmaahịa | Martech Zone
Naanị m chọrọ ịkekọrịta ihe ngosi m mere Nkọ Mkpụrụ. Anyị nwere ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ mpaghara ndị na-achọ ịmụ ka ha ga-esi tinye blọọgụ na soshal midia na mbọ ha na-agba ịkwalite azụmaahịa ha. Ọ bụghị ọtụtụ ebe a na ngosi - ọtụtụ n'ime ya ka m na-ekwu, yana ịtụgharị azụ na azụ n'etiti saịtị na ngosi.
Ọ bụ isiokwu ọhụrụ Powerpoint / Keynote nke m mere, agbanyeghị!
Tags: azụmahịakeynotepowerpointngosinkọ ucheslideshare2.0 webweb 2.0 maka azụmahịa
Dị ka ọ na-adịkarị, m ga-ekwu naanị n'ụdị, ọ bụghị ọdịnaya.
Na slide mbụ m ga-agbakwunye mmetụta Web 2.0, dị ka ịtụgharị uche na okwu, na "maka azụmahịa" dị ka kpakpando na-enwu gbaa.
Ihe ngosi ndi ozo nwere otutu ederede. KISS. Chọrọ ka ndị na-ege gị ntị gee gị ntị, ọ bụghị ịgụ site na slide ahụ ka ị kwughachiri gị. Ihe dị mfe bụ okwu ndị bụ isi.
Dịka na slide “History”, nwee naanị onyogho larịị na-anọchite Web 1.0, wee slide ọhụrụ na-anọchi anya Web 2.0. Word na-akọwa nkọwa niile site n'okwu, ọ bụghị site na slide.
Ezigbo ndụmọdụ, Martin! Amaara m na ndị mmadụ na-echeta ihe ngosi karịa okwu, yabụ m ga-emegharị ngosi a iji hụ na m nwere ihe ngosi ndị ahụ. Daalụ !!!
slideshare na-enye gị ohere itinye ọdịyo na ihe ngosi gị. Nke ahụ dị mma.
N’echiche na ọtụtụ mmadụ na-eji itunes iji nweta pọdkastị; I nwekwara ike kesaa dị ka am Enhanced Poldcast.
Otu ihe na-adọrọ mmasị - ọ dị ka Slideshare nwere ụdị usoro mkpuchi. Oge ụfọdụ ụdị izizi m na-egosi, oge ọzọ nke abụọ m na-eme. Echere m na m ga - akwụsị 'mmelite' ma malite itinye 'nsụgharị'.